Booliska Uganda ayaa markale xiray Fanaanka caanka ah ee Bobi Wine | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska Uganda ayaa markale xiray Fanaanka caanka ah ee Bobi Wine
Booliska Uganda ayaa Talaadadii maanta markale xiray Bobi Wine, oo ah heesaa caan ah rajada madaxweynenimo ee mucaaradka, wax yar uun kadib markii si guul leh loogu cadeeyay inuu yahay musharax doorashada sanadka dambe.
Wine, oo u tartamaya qabashada kursiga hogaamiyaha mudada dheer ee Uganda, ayay booliisku ka kaxeesteen gaarigiisa. Telefishanka maxaliga ah ee NBS, oo ka warbixinaya goobta, ayaa sheegay in heesta, oo magaceeda dhabta ahi yahay Kyagulanyi Ssentamu, la saaray gaadhiga booliiska iyada oo dagaal gacan ka hadal ahi dhex maray bilayska iyo taageerayaashiisa.
Afhayeen u hadlay booliska ayaan isla markiiba ka jawaabin su’aalaha la weydiiyay. Masuuliyiintu waxay had iyo jeer ku eedeeyaan Wine qorsheynta isu soo baxyo carqaladeyn kara deganaanshaha bulshada, taas oo uu diiday.
Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in Madaxweyne Yoweri Museveni, oo xukunka haya tan iyo 1986, uu si aad ah ugu tiirsan yahay ciidamada qalabka sida si uu u muujiyo awoodiisa.
Museveni, oo loo magacaabay musharaxnimo Isniinta, ayaa intaa kadib sheegay in dowladiisa aysan u dulqaadan doonin howlaha cadow uusan magacaabin oo sida la sheegay qorsheynaya fowdo.
“Ma jiro qof halkan carqaladeynaya. Qofkii isku dayaa wuu ka qoomameyn doonaa. Sababtoo ah annaga ahaan, uma ciyaareyno, ”ayuu yiri madaxweynaha. “Xisbiga talada haya wuxuu u dagaalamay inuu nabad ka dhigo dalkan. Ma jiro qof qoriga nooga badan. Laakiin kama baqeyno dadka. ”
Komishanka doorashadu ma cayimin waqtiga ay dhaceyso doorashada.
Wine, 38, ayaa qabsaday fikirka dad badan oo reer Uganda ah baaqiisii ​​joogtada ahaa ee ku saabsanaa in 76-jirka Museveni uu howlgab noqdo. Wuxuu si gaar ah caan ugu yahay dadka saboolka ah ee ku nool magaalooyinka.
“Waxaan hadda galeynaa marxaladdii ugu adkeyd ee halgankeenna xoreynta!” Khamri ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay ka dib markii la cadeeyay musharaxnimadiisa
Khamriga iyo hogaamiyaasha kale ee mucaaradka ayaa si joogto ah loo xiray sanadihii la soo dhaafay, mararka qaar booliska ayaa ku xiray guryahooda iyagoo ku andacoonaya baahi loo qabo in laga hortago dambiyada la galayo
Ficilladaas waxay xoojiyeen aragti ay qabaan qaar ka mid ah dadka reer Ugaandha oo ah in booliisku ay ku shaqeeyaan amarka Museveni, kaasoo diiday baaqyada isdaba jooga ah ee ah inuu si nabad ah uga fariisto.
Dalkan ku yaal Bariga Afrika waligiis ma arag goob si nabad ah xukunka loogu wareejiyay tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska 1962.
Xuquuqda daabacaadda 2020 Associated Press. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Maadadan lama daabici karo, lama baahin karo, dib looma qori karo ama dib looma baahin karo ogolaansho la’aan.
Booliska Uganda ayaa markale xiray Fanaanka caanka ah ee Bobi Wine was last modified: November 3rd, 2020 by Admin
Saldhigga Mareykanka ku leeyihiin Jabuuti oo la geliyay xaalad deg-deg ah oo Caafimaad